Eke uhie: nkọwa nke echiche site na foto, ogologo oge ha bi, ihe ha na-eri, otu esi ewepụ ha n'ụlọ - Ụlọ, ụlọ - 2020
A na-ebute redroach ma ọ bụ Prusak na ndị Russia n'oge Agha Patriotic nke 1812. Ọ bụ ndị agha nke ndị agha Napoleon na anyị kwesiri ịmatakwu ọgwụ ahụhụ a na-emerụ emerụ.
Prusaks na-amịpụta nwa, n'ime ọnwa ole na ole mgbe ndị a na-achọ ihe na-asọ oyi n'ụlọ gị, ọnụ ọgụgụ ha nwere ike ịbawanye okpukpu iri.
Ihe nkedo na-esi ike, na-agbanwe ngwa ngwa maka ọnọdụ ọhụrụ, ha nwere ike ịdị ogologo oge na-enweghị nri, ha bụ ehihie.
Ego ole ka ha na-acha uhie uhie?
Nri na ihe oriri
Kedu ihe mere eji apụta na nke a ma ọ bụ ebe obibi ahụ?
Ndị mmadụ hà na-emerụ ahụ?
Ndi na-acha uhie uhie aru?
Ụzọ nke mgba
Ụdị na ọdịdị
Ocha uhie uhie obere echiche ma e jiri ya tụnyere ndị nnọchiteanya nke ezinụlọ a.
Ọnụ nke okenye (okenye) dị otu na ọkara centimita.
Isi ya bụ oblong, anya dị iche iche, ọchịchịrị. Eke na-acha uhie uhie dị ogologo, ya na ndị ọkachamara pụrụ iche na-ekwe gaa na ụgbọ elu.
Ahụ na-acha ọbara ọbara - agba odo na mejupụtara akụkụ ndị a:
Ụmụ ahụhụ ahụ agbasawo nku na elytra siri ike n'elu, mana enweghị ike ịgba, nwere ike ime atụmatụ mgbe ịda site na elu. Ma, e nwere efegharị na-efe efe. Ngwa ngwa gnawing.
N'ime ụmụ nwoke, ahụ dị warara, afọ na-enwe ụdị ụdị osisi, ibe ya anaghị ekpuchi ya.
Ahụ nke nwanyị ka mbara, afọ na-agba gburugburu, nke nku kpuchiri.
Otu n'ime akụkụ ndị kachasị mkpa n'ime ihe ndị na-egbuke egbuke bụ antennae, enwe mmetụta dị ukwuu maka ụdị ihe dị iche iche na-esi ísì ụtọ. Site n'enyemaka ha, ndị Prussia na ndị ikwu ha na-ekwurịta okwu, ha na-agbakwa na mbara igwe. Ọnwụ nke otu ma ọ bụ abụọ aji na-aghọ ezigbo ọdachi nye ụmụ ahụhụ ndị a, ebe ha na-efunahụ ozi gbasara ụwa gbara ha gburugburu.
Nyere aka! Otu ihe dị iche iche nke Prusaks bụ ihe dị mkpa - obere ọdụ dị na njedebe nke ahụ (otu n'akụkụ nke ọ bụla).
Ị nwere ike ile anya ka ị mara ọdịdị dị na foto nke acha uhie uhie n'okpuru:
Ugbochi bụ ụmụ ahụhụ na-ezughị ezu metamorphosis (mgbanwe). Ha enweghi ugbua nwa akwukwo, ndi ozo na-ewerekwa ihe di otu onye di elu dika otutu.
Buru ndi Prussian uhie n'ime afo.
Ndị inyom na-etinye nsen (ihe dị ka mkpụrụ ego 30) n'otu obere capsule aja (ootek). Ụmụ nwanyị n'ọdịnihu na-eburu ha na njedebe nke afọ (akụkụ ahụ na-asọpụta nke iyi ahụ ga-ahụ ya n'anya) larvae hatching (2-4 izu).
Agba mbụ nke larvae dị ọcha, nke nta nke nta ọ na-agba ọchịchịrị. Larvae (nymphs) na-agbazi isii ruo mgbe ha na-ahụ onyinyo. N'ime oge ndụ ha, ụmụ nwanyị na-esi n'agbata afọ anọ ruo iri ma na-enye aka na ọmụmụ nke ihe ruru narị atọ na-eto eto.
Ọdịdị red prusak n'ụlọ na nri zuru oke na mmiri site na ọnwa 8 ruo 10 (ogologo oge a na-agụnye ndụ nke okenye (ọnwa 7-8) na ọhụụ nke nymph).
Prusak adịghị amasị ìhè ehihie ma si na ulo ha gbapu nani n'abali.
Ọ bụrụ na ị na-enyo enyo maka ọdịdị nke ndị ọbịa na-acha uhie uhie na ụlọ gị, gbanye ọkụ na kichin n'abalị: nchịkọta ndụ site na sink na okpokoro iri nri na mpaghara ọ bụla.
Ebe obibi kachasị mma maka uhie uhie na-acha uhie uhie bụ ụdị ọrịrị dị iche iche (nke mere azụ na afọ nke ụmụ ahụhụ ahụ na-akpachi anya na ebe ndị ahụ): n'ala, n'okpuru ogige, na ọnụ ụzọ ụzọ, arịa. Tụkwasị na nke ahụ, ndị Prussia nwere ike ịhọrọ ngwá ụlọ na akwụkwọ maka nhazi ahụ.
Ndị ahụhụ ndị a bụ omnivores.. Ọ bụghị nanị na ihe oriri nwere ike ịbụrụ ha ihe oriri, ma akwụkwọ, akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ, akwụkwọ ntanye, ákwà na ọbụna ncha.
Achị na-enwe ike ịnwụ ogologo oge, ma ụkọ mmiri anaghị anabata. Ọ bụrụ n'emeghị nri, ndị Prussia ga-adịgide ruo otu ọnwa, mgbe ahụ, na-enweghị mmiri ọbụna otu izu agaghị adịgide.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya:
ezughị okè. Ugbo ala nke ruru ala, efere ruru unyi, nkuku a na-ekpofu ahihia, ihe oriri na-eri na ebe di iche iche (nke a nwere ike iburu shuga ma obu ntụ ọka);
ihe si njem. Otu ahụhụ nwere ike ịbata n'ụlọ gị n'ụsọ njem, na-akụ ya site na họtel ma ọ bụ ụgbọ njem;
ndị agbata obi dysfunctional. Kedu ụdị akụkụ ahụ gị na akụkụ gị (n'elu, n'okpuru, site na mgbidi). A ghaghị esi n'ime ha banye n'ime ulo gị site n'olulu mmiri ma ọ bụ mgbawa na mgbidi na n'ala;
ezumike na-ezighi ezi na ọkpọkọ na-akwagharị. Obere ebe mmiri na-etinye ebe mmiri na-ekpo ọkụ - nke a bụ ezigbo paradaịs maka ihe ọchị. Ọ bụrụhaala na mmiri dị nso na okpomọkụ na ụlọ ahụ adịghị ada n'okpuru ogo 10, ndị Prussia ga-adị njikere ibi na gị ruo mgbe ebighị ebi.
Mkpa! Uhie uhie dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ: mgbe nile na-ejikọta na mkpofu, ihe mkpofu ụlọ, unyi, ha na-ebu nje bacteria, yana nsen helminth.
Ọrịa afọ, ụkwara nta, helminthiasis - nke a bụ nanị ntakịrị nta nke ọrịa ndị Prussia nwere ike iweta na ha.
Ndị ọkà mmụta sayensị amawo ọtụtụ okwu ebe ndị a na-eri nri na-eri akụkụ mgbu nke derms na ihu na aka nke ndị mmadụ, mana ha emeghị ka ọ bụrụ mmerụ ọ bụla. Ya mere, anyi nwere ike ikwu na Prusaks adịghị aru.
Ozugbo ịchọtara ọnụnọ n'ụlọ nke ọ dịkarịa ala otu ụcha ọbara ọbara - Mee ihe ozugbo.
N'ihi na mgbe izu 2 gachara, ụlọ gị ga-ejikọta ọtụtụ ìgwè ndị ọrịa ndị a na-akpasu iwe.
Ịlụ ọgụ na-eme ka ọ dịkwuo irè kwesiri ime ihe ndia:
tinye nri n'ime igbe ma ọ bụ akwa akpachi akpa;
jide n'aka na n'ime sink ma ọ bụ na tebụl kichin anaghị anọgide na-eri anụ na-eri nri na ya;
nọgide na-adị ọcha n'ụlọ;
ihe mkpofu nke ụlọ na-ewe oge, anaghị echekwa ihe mkpofu ruo ọtụtụ ụbọchị;
tinye ihe niile na ọkpọkọ na ịgba ụda, dozie nkwụsị;
Akwụsịla n'elu tankị na mmiri, ebe ụmụ ahụhụ ga-aṅụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịga n'ihu iyi egwu Prusakov.
Kedu ka esi tufuo uhie uhie n'ime ulo? Enwere ike ime nke a na ụmụ ahụhụ na-emepụta ihe. Ruo ugbu a, pụtara maka mbibi nke ihe eji eme ụlọ, enwere ọtụtụ. Ndị a bụ gels: Dohloks, Global; Na-agbanye ume: Raid, Ụlọ Dị ọcha, Raptor; crayons, powders: FAS, Karbofos; emulsions, ọnyà ndị pụrụ iche, na ndị ọzọ. Ndị ọkachamara nwere ike ịtụkwasị ụlọ ọrụ disinsection obi ma ọ bụ ịnagide onwe ha.
Ọ ga-ekwe omume ịnagide ihe ndị na-eme mkpọtụ usoro ndi mmadu:
site n'enyemaka nke boric acid (ntụ ntụ). Ngwurugwu a na-eme ka pests ghara ịgwụ. A na-agwakọta acid ahụ n'ime poteto ndị a kpụkọrọ akpụkpọ, a na-akụkọta bọọlụ ma dọba ya gburugburu ụlọ ahụ;
Mkpa! Ọ bụrụ na ulo ahụ nwere anụ ụlọ ma ọ bụ obere ụmụaka, jiri nlezianya jiri usoro a! Boric acid bụ nsi!
site n'enyemaka nke ọnyà onwe onye. Maka nke a, a na-eji ite ejiri ihe na-egbuke egbuke (mmanụ ma ọ bụ jelii mmanụ) na-etinye ya na ya.
Igha agha na-acha uhie uhie dị irè karị, ọ dị mma iji kwado ndị agbata obi gị niile. Mgbe ahụ ị ga-abụ 100% mara na ọ bụghị otu "onye Prussian" ga-adị ndụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye iro agbajiri mgbidi ahụ, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ anyị, ị maara ugbu a ka ị ga-esi nweta ụlọ uhie.